Malunga R & D
imisebenzi eyahlukeneyo R & D kuquka yokuLungiselela, iindlela zovavanyo imveliso kunye nemigangatho imveliso yemichiza. inkampani yethu ngokubanzi agglomeration ulwazi, iteknoloji, iitalente kunye nezinye izinto ezintsha, yaye uphumeza ezintsha yenzululwazi kunye nobuchwepheshe kwimeko jikelele kwezoqoqosho kunye nophuhliso olukhawulezayo loqoqosho ulwazi.
Amaqela R & D
Inkampani yethu eziliqela amaqela intsebenziswano uphando. Kwangaxeshanye, amaqela zethu kuba abafundi abatsha zobugqirha liyakhula, leyo usibekile isiseko italente ukwenzela uphuhliso olukhawulezayo R & D. Iqela babenamathele ingqikelelo ekulandeleni oyena ongunaphakade, balwela anikele abathengi dear imveliso yethu esemgangathweni.
Thina liseke intsebenziswano kunye namashishini amaninzi. iilebhu Uphando kunye neziseko zoshishino ziye zasekwa lonke China, kuquka headquaters e Shanghai, amashishini e Jiangshu, Zhejiang kunye Hubei. Sinawo ukukwazi ukuvelisa iimveliso ezisemgangathweni kunye nokunciphisa lokusingqongileyo longcoliseko, resource kunye nombane wemveliso.